Anaran-tsehatra: Fanehoan-kevitra Mendrika Ho Arovana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Gabriela Garcia Calderon
Voadika ny 20 Novambra 2012 22:05 GMT
Raha tokony hianatra sy hamerina hamokatra tarehimarika lavabe na fifangaroanà litera sy tarehimarika isika isak'izay hiditra aminà tranonkala iray, dia tsy ho toy izao fantatsika hatrizay izao ny aterineto. Tsy isalasalàna fa ny tsy maintsy hanoratana 173.194.42.19 mba hidirana amin'ny Google na 72.21.214.128 ho an'ny Amazon, ohatra, dia mety hahakivy ny maro amin'ireo mpampiasa ary mety ho loza mitatao amin'ny lojikan'ny fidirana malalaka izay mamaritra ny toetran'ny habaka aterineto.
Mba hahafahany miasa araka izao efa ataony izao, ny aterineto dia mila ireto anarana ireto — “Google,” “Amazon,” “Yahoo” — izay mandefa antsika avy hatrany any amin'izay tiantsika haleha amin'ny fitendrena fotsiny ireo teny eo amin'ny fitendrintsika. Ny solosaina (na ireo fitaovana finday) no mandray an-tànana ny ambiny.
Ity dingana ity dia ny Domain Name System (DNS) no misahana azy. Ny DNS dia mampifandray ny anaran'ny tranonkala (google.com, ohatra) amin'ireo adiresy niomerika lavabe sy saro-bahàna ary mamela ireo mpampiasa azy mba ho afaka mampifandray “domain name”, na “anaran-tsehatra” iray aminà adiresy IP iray — izay manamarika ny toerana misy ilay tranonkala tiantsika hidirana — amin'ny làlana tokana.
Ankoatra izay, ny anaran-tsehatra dia azo foronina ho endrika fomba fiteny na fehezanteny. Araka izany dia azo atao ny manao tsoakevitra hoe ny fanomezana endrika ho anà andrim-panjakana iray ataon'ireo mpandrindra anaran-tsehatra amin'ny dingana voalohany na Generic top level domain names – gTLD — (izay ny “.com”) sy ny anaran-tsehatra anavahana ny firenena – ccTLDs- (ny “.ar”, “.br” o “.cl”, ohatra) dia fanalahidy ho amin'ny fanadihadiana.
Ny Initiative for Freedom of Expression on Internet (iLEI, ho an'ny anarana Espaniola niaviany), fandaharanasa manokana an'ny Foibe Fandinihana ny Fahalalahana Maneho Hevitra sy ny Fidirana Hahazo Vaovao ao amin'ny Anjerimanontolon'i Palermo ao Arzantina, dia miteny ao amin'ny gazetiny ny fifandraisana misy eo amin'ny fahalalahana maneho hevitra, ny anaran-tsehatra, ary ireo karazany maro samihafa neken'ny rantsam-pitantanan-dry zareo.
Iza no mitantana?
Sary avy amin'ny Shutterstock, fizakà-manana: dencg
Ny andraikitra amin'ny fitantanana ireo anaran-tsehatra dia zavatra ‘tsy maintsy‘ ho an'ny aterineto mba hiasàny araka izay efa nataony hatrizay mba hahamora ny hahitan'ireo mpampiaza azy ny tranonkala.
Maro an'isa ireo pejy ilàna karazana fanaraha-maso na fandrindràna. Io asa io dia ny Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) no miandraikitra azy. Ankoatra ireo asany hafa, ny ICANN dia tomponandraikitra amin'ny famaritana ny politika mikasika ny fomba tokony hiasàn'ny fotodrafitrasa sy ny fandrindràna ankapobeny ny rafitra DNS.
Saingy ny ICANN kosa tsy tomponandraikitra amin'ny fitantanana sy ny fanomezana ny gTLD sy ny ccTLD tsirairay. Ho an'ny gTLDs, ny ICANN dia mamindra ny fahefany ho amin'ireo mpandraharaha sasany ary, ho an'ny ccTLDs, ho anà sehatra iray voafaritra ho an'ireo mpikaroka ao amin'ny tetikasa, ho amin'ireo sampam-pitantanana isaky ny firenena.
Vokatr'izay, araka ny nofaritan'ny iLEI ao amin'ny fikarohan-dry zareo, ny anaran-tsehatra dia azo eritreretina ho toy ny endrika fehezanteny. Ny fitsabahana tsy mamely ataon'ny fanjakana, refa manome na manavao azy ireny, dia mety hisy fiantraikany amin'ireo mpampiasa na ny tompony izay mampiasa ity zo fototra ity.
Maodely fitantanana ny ccTLDs
Mpitantana ccTLD maro samihafa manerana izao tontolo izao no mifampizara asa aman'andraikitra samihafa. Ireny dia ahitàna ireo fisoratàna anarana tsotra ho an'ireo mpikambana, tolotra ho an'ireo mpampiasa voasoratra anarana sy sampana mpandray ny fisoratana anarana, ary fanehoana ny sehatra any anaty ‘forums’ mifandraika aminy.
Nandray karazana maodely samihafa ireo mpitantana ny ccTLD, maodely izay rehefa fakafakaina miaraka amin'ny resaka zo hanana fahalalahana maneho hevitra, dia sady manana tombony no misy kilema ihany koa.
Amin'ny lafiny ilany, ananantsika ny antsoina hoe “Maodely Mpitantana – Administrator Model” miaraka amin'ny fitsabahan'ny fanjakana. Ho an'ireo tranga ireo, ny fitantanana ccTLD dia eo ambany vahohon'ny governemanta — tsy misy sehatra hafa mandray anjara.
Ohatra iray amin'ity maodely ity i Venezoela, toerana itantanan'ny National Telecommunications Commission/ Kaomisionam-pirenena misahana ny Fifandraisan-davitra[es] ny “.ve” (CONATEL, ny anarany amin'ny teny Espaniola) , eo ambany fahefan'ny Minisitry ny Fahefam-Bahoaka ho an'ny Fifandraisan-davitra sy ny Informatika. Mety ho ohatra iray hafa i Shina amin'ity karazana maodely ity, izay na misy ihany aza endrika vitsivitsy hafa, ny Akademian'ny Siansa Shinoa, eo ambany fahefan'ny Ministeran'ny Indostria Informatika ao Shina, no manaramaso ny CNNIC izay mitantana ny “.CN”.
Misy indro kely ity maodely ity, na izany aza. Raha toa heverintsika ho toy ny fomba ho amin'ny tombontsoan'ny daholobe, na kiana politika ny anaran-tsehatra iray, arakaraky ny haavon'ny fanarahamason'ny governemanta no vao mainka mahabe ny fiahiahiana ateraky ny fandàvana fisoratana anarana na fanavaozana anaran-tsehatra mety hifandray amin'ireo mpanakiana ny governemanta.
Ny maodely iray hafa dia mety ho fantatra tahaka ny hoe maodely “Multiple Interested Parties“. Amin'ity tranga ity, dia misy firotsahan'ny sampandraharaham-panjakana an-tsehatra, saingy koa misy avy amin'ny fiarahamonina sivily. Toy ny tranga any Brezila, toerana nametrahan'ny NIC.br, fikambanana sivily tsy mikatsaka tombontsoa, ny fanapahan-kevitry ny CGI.br (Kaomity Mpitantana ny Aterineto), antokon-draharaha iray ifangaroan'ireo solotenam-panjakana, ny mpisehatra tsy miankina, ny fiarahamonina sivily, ary ireo manampahaizana manokana. Tranga iray hafa i Kanada, izay ny Canadian Internet Registration Authority (CIRA) no tomponandraikitra amin'ny fitantanana ny fisoratana anarana, izay ireo mpampiasa ihany no mifidy ireo manampahefana.
Fitantanana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena
Araka ny nomarihan'ny iLEI ao anatin'ilay taratasy, ny lafatra, tokony hanana mpitantana ny fanoratana sy fanavaozana anaran-tsehatra ny fanjakana, mahaleo tena manoloana izay mety ho endrika fitsabahan'ny governemanta. Noho izany, mety tena ho ilaina ny maodely maro mpandray anjara.
Ankoatra izay, any amin'ireo firenena ahitàna mpitantana avy amin'ny governemanta, tokony ho tsara antoka ny fanomezana endrika iray tsy itsabahan'ny governemanta. Mba hanatrarana an'io, dia zava-dehibe ny fanomezana an'ireo mpitantana ny fahamarinan-toerana momba ny hetra sy ny antoka omena azy ireo fa ny fanesorana dia ho arahana fepetra manokana hisorohana ny fandraisana fanapahan-kevitra mitanila.
Ho an'ny tranga tsirairay, raha raisintsika hoe ny lanjan'ny anaran-tsehatra iray dia efa endrika fehezanteny sy fanehoan-kevitra, ireo mpitantana fisoratana sy fanavaozana dia tokony hitazona ao an-tsainy ireo fenitra iraisam-pirenena izay miantoka ny fampiharana ireo zo amin'ny fanehoan-kevitra sy fitenenana.
Ireo mpitantana anaran-tsehatra dia tokony hampifanitsy ny ataony amin'ny torolalana voatahiry ao anatin'ny Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression (IACHR), (Tatitra isan-taona avoakan'ny birao manokan'ny mpitatitra momba ny fahalalana maneho hevitra) izay milaza fa ny fanehoana votoaty politika dia mendrika homena ny fiarovana ambony indrindra. Ny fandàvana tsy handrakitra anaran-tsehatra iray dia tokony jerena amim-piahiahiana sady alalinina fatratra miaraka amin'ny topimaso mikasika izay votoatin'ilay tranonkala, satria mety ho efa sivana hatrany am-piandohana izany, izay tena raràn'ny IACHR manokana.
Tokony ihany koa ireo mpitantana anaran-tsehatra hirotsaka hampihatra ny “General Comment number 34″ amin'ny Toko faha-19 amin'ny International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) – Fifanarahana iraisampirenena momba ireo zo sivily sy politika. Milaza ilay toko fa tsy tokony horahonana izany zo izany noho ny firehan'ny olona iray tsy maintsy arovana.
Ny fampifanarahana ny dingana amin'ireo fenitra ireo, ataon'ireo mpitantana anaran-tsehatra any an-toerana, dia hiantoka ny fahafahan'ny mpampiasa hampiasa ny zony ety anaty aterineto.